တောရက်စ် | 11/09/2021 20:00 | လှပမှု
ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်ကိုလိုက်နာဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် ကျန်းမာလှပသောအသားအရေကိုခံစားပါမရ။ ဒါပေမယ့်ယနေ့ခေတ်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့အလှကုန်တွေအများကြီးအများကြီးရှိနေတာကအဲဒါကိုလွှမ်းမိုးတာဒါမှမဟုတ်နေရာလွဲတာကိုခံစားရတာပုံမှန်ပါပဲ။ လူများစွာသည်ကြိမ်နှုန်း၊ ထုတ်ကုန်များ၏အသုံးဝင်မှုနှင့်၎င်းတို့ကိုအသုံးချရန်မှန်ကန်သောအမိန့်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများစွာရှိသည်။
သို့သော်၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သူများသို့မဟုတ်အလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုတစ်ခါမှမလိုက်နာသောသူများကိုထိခိုက်စေသောအရာလည်းမဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသော်လည်း၎င်းကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမမီနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုသံသယ ၀ င်နိုင်သည်။ ဒီမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတာကိုငါတို့ပြမယ် ကောင်းမွန်တဲ့အလှအပရေးရာကိုစတင်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းတွေ.
1 နေ့၊ ည၊ မိတ်ကပ်မလိမ်းရင်တောင်အလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
နေ့၊ ည၊ မိတ်ကပ်မလိမ်းရင်တောင်အလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
မင်းရဲ့အသားအရည်ကိုနေ့တိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကမင်းမိတ်ကပ်သုံးတာဘဲဖြစ်ဖြစ်မသုံးတာကောင်းလား။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုသိဖို့ပိုလွယ်တယ် ထုတ်ကုန်များသည်နေ့တွင်ဓာတ်တိုးစေသောကြောင့်မအိပ်မီထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသည်။ ဒါပေမယ့်သင်မိတ်ကပ်မလိမ်းတဲ့အခါမျက်နှာသန့်စင်ခြင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ဖို့ပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်။
သို့သော်နေ့ဘက်တွင်အရေပြားသည်ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသောညစ်ညမ်းမှု၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်ပြင်ပအရာများကိုစုပ်ယူသောကြောင့်အလှအပအတွက်ကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်ဤအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးညဘက်တွင်မျက်နှာအသားအရေအားပြန်လည်အသက်ရှူစေပြီးပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကောင်းမွန်တဲ့အလှအပရေးရာအတွက်ပထမဆုံးမရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းကတော့သန့်ရှင်းရေးပါပဲ.
ဆောင်ထားရင် ဆောက်တည်ပုံ ထုတ်ကုန်များကိုဖယ်ရှားရန်သင်တိကျသောအလှကုန်များကိုသုံးရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသုံးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် cleansing milk နှင့် eye make-up remover၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမျက်နှာနဲ့မျက်လုံးရဲ့အသားအရည်ကိုပိုပြီးနူးညံ့ပြီးလေးစားမှုရှိလို့ပါ။ သင့်မှာမိတ်ကပ်မရှိတဲ့အခါ micellar water ကိုသုံးပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ parabens သို့မဟုတ် silicones မပါဘဲဆပ်ပြာဖြင့်သန့်ရှင်းရေးကိုအပြီးသတ်ပါ။
micellar ရေ၊ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးရည်၊ မည်သည့်အလှကုန်ပစ္စည်းမှမဆိုအရေပြားပေါ်ရှိထုတ်ကုန်များ၏အကြွင်းအကျန်များကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးနိုင်သောဤနောက်ဆုံးအဆင့်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဆပ်ပြာနှင့်ရေတို့ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးကောင်းကောင်းလုပ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲ၊ မနက်ခင်းမှာတောင်ဆပ်ပြာနဲ့ရေကပထမခြေလှမ်းပါအလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုမဆက်မီ
သန့်ရှင်းရေးနှင့်ရေဓါတ်တို့အကြား မင်းရဲ့အလှအပရေးရာမှာအခြားအဆင့်တွေကိုထည့်နိုင်တယ်ဒါပေမယ့်မင်းမှာအချိန်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လောကထဲကိုစနေပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းတွေနဲ့စတာအကောင်းဆုံးဘဲ။ မင်းရဲ့မျက်နှာအလှအပကိုချဲ့ချင်ရင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသားအရေကိုသန့်စင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခြား toner တွေကိုမလိမ်းခင်မှာသုံးတဲ့ toner ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။
serum သည် moisturizer မတိုင်မီလိမ်းပေးသောအပိုရေဓါတ်ဖြစ်သည် သငျသညျခြောက်သွေ့ရင့်ကျက်သောအသားအရေရှိလျှင်သို့မဟုတ်ပိုဂရုစိုက်ရန်လိုလျှင်နံနက်နှင့်ညတွင်သွေးရည်ကြည်အနည်းငယ်ကိုလိမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအဆင့်များသည်တင်းကျပ်စွာမလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အခြေခံအလှအပရေးရာဖြစ်မည့်အရာတွင်မပါဝင်ပါ။ ဤအတွက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ရေဓါတ်လိုအပ်သည်။
ယခုအခါအသားအရေကိုရေဓာတ်ဖြည့်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့်မျက်နှာအသားအရေကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အရေပြားတစ်ခုစီတွင်လိုအပ်ချက်များရှိနေသောကြောင့်သင်၏အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ကိုမ ၀ ယ်မီအကြံဥာဏ်ကောင်းရယူပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတိုင်းမနက်နှင့်ညတွင်သင်၏မျက်နှာအစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ကိုလိမ်းပါ.
အခြေခံအလှအပလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့၊ eye contour ကိုမမေ့ပါနဲ့မရ။ မင်းရဲ့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကပိုနူးညံ့တဲ့အသားအရည်ကိုဂရုစိုက်ဖို့မင်းကငယ်သေးတာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ်တစ်မိနစ်သာကြာမည်ဖြစ်ပြီးထိုဒေသတွင်အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ ဤရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ကြည်လင်။ ငယ်ရွယ်ပြီးကျန်းမာသောအသားအရေကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ကောင်းမွန်တဲ့အလှအပရေးရာအတွက်မရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းများ